လျှာအတွင်းလွှာထဲထိစိမ့်ဝင်သွားအောင်အရသာထူးခြားတဲ့ စင်ကာပူစတိုင်ကြက်ကြော်ဆိုင်လေး – FoodiesNavi
လူနေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ အစားအသောက်သွားစားရင်တောင် ? ? ကြိတ်ကြိတ်တိုးမှာယူနေရတော့ မင်မင်တစ်ယောက် မြန်မြန်ဗိုက်ဖြည့်နိုင်မယ့် Fast Foods တွေဘက်ကို ?? ခြေဦးလှည့်ခဲ့ပါပြီ။ ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ ?‍♀️ လျင်လျင်မြန်မြန်စားရသလို ကမ္ဘာကျော် Fast Foods ဆိုင်တွေပါ ရန်ကုန်မှာခြေချလာတော့ ? Fast Foods တွေရဲ့ခေတ်ကောင်းချိန်ပဲလေ။ ရွေးစရာဆိုင်တွေများလာတော့ တစ်ဆိုင်ကိုတစ်ခါထက် ပိုမစားချင်တော့တာလည်း မင်မင့်ရဲ့ ? ဘဝင်လေဟပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။ Fast Foods တွေကတစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင် အရသာတွေသိပ်မကွာဟပေမယ့် ? Fast Foods အပြင်ထပ်ရနိုင်သေးတဲ့ Menu အဆန်းလေးတွေကတော့ ? ရင်ခုန်စေတာအမှန်ပဲလေ။ ဒီတော့ မင်မင်သွားစားဖြစ်တဲ့ဆိုင်တွေထဲက Fast Foods လည်းဂွတ် ၊ Other Menu တွေလည်းဖိုင်းပြီး Service တွေကိုပါ အပိုထပ်ဆောင်းကျေနပ်မိတဲ့ “ Kiasu Kitchen “ ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို သွားစားဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့အစားတစ်လိုင်းတို့ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
Kitsu ရဲ့ကြက်ကြော်တွေကို ? စင်ကာပူစတိုင်ကြော်ထားတာဖြစ်လို့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ကြီးဖြစ်မနေဘဲ ??‍♂️ အချိုအငံအစပ်အဟပ်က မြန်မာလျှာနဲ့ တော့ ? လုံးဝကွက်တိပဲ။ အပေါ်ယံအလွှာကမွမွလေးနဲ့ ဝါးလို့ကောင်းသလို ? အထဲကကြက်သားအလွှာကလည်း နူးအိနေတော့ စားလို့ကောင်းဝါးလို့ကောင်း တခြားဆိုင်တွေထက် ရေရေလည်လည်ထူးခြားတာကတော့ ? ကြက်ကြော်ကြီးတွေက ရှယ်ကြီးတာပဲ။ ကြက်ကြော်ဆို နှစ်တုံးလောက်မှအာသာပြေတဲ့ မင်မင်တောင် ဒီဆိုင်ရောက်မှ ? တစ်တုံးစားပြီးလက်မြှောက်အရှုံးပေးရတော့တာပဲ ။ ကြက်ကြော်ကို အချိုအစပ်တော့ သီးသန်းကြီးခွဲမထားဘူးရယ် ? အချိုနဲ့အစပ်အချဉ်ရည်လေးတွေတော့ သီးခြားခွဲပေးထားတယ်။ အစပ်နဲ့တို့စားလိုက်ရင် ချဉ်စပ်အရသာလေးကို ထိထိမိမိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ?
Kiasu Kitchen မှာ မင်မင်အခိုက်ဆုံးကတော့ စင်္ကာပူစတိုင်ထမင်းကြော်ပါပဲ ? အပြင်ပန်းကကြည့်ရင် ဒံပေါက်ပုံစံပုံပေါ်နေပေမယ့် တကယ်စားကြည့်လိုက်တော့အခါမှာတော့ ဒံပေါက်လိုအဆီအနှစ်မများဘဲ မွှေးမွှေးလေးနဲ့စားလို့တော်တော်ကောင်းနေရော ? ထမင်းကြော်ထဲမှာထည့်ကြော်ထားတဲ့ အသီးအနှံလေးတွေအထိ အရသာစိမ့်ဝင်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ရအောင် ဆန်သားအိအိလေးနဲ့ရောပြွမ်းပြီး အရသာကရှယ်ပဲ ? ဒီဆိုင်မှာလာစားတဲ့ စားသုံးသူတွေကလည်း စင်ကာပူထမင်းကြော်ကို တော်တော်အမှာများကြတယ်။
Burger ကတော့ ငါးနဲ့ကြက်သားနှစ်မျိုးရနိုင်ပေမယ့် မင်မင်ကတော့ကြက်သားနဲ့ပဲမှာစားဖြစ်တယ်။ အရမ်းကြီးမကြီးပေမယ့် အထဲကအသားပြားကတော့ တော်တော်လေးကြီးတယ်ရယ် အစာပလာလေးတွေလည်းစုံစုံလင်လင်ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်မင့်လျှာနဲ့တော့ နည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အရသာအရမ်းကြီး မထိမိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။
ကြက်သားပြားကြော်နဲ့ကြက်ဆီထမင်းကတော့စွန်းကောင်းတယ် ကိုယ့်လူ ? ကြက်သားပြားပေါ်မှာ ငရုတ်ကောင်းအနှစ်လေးတွေ ဆမ်းထားတာက ကြက်သားပြားအရသာကိုနှစ်ဆတိုးသွားသလိုပဲ လျှာအတွင်းလွှာထဲအထိစိမ့်ထွက်သွားတာပဲ။ ကြက်ဆီထမင်းကအရမ်းကြီးမအီသလို အရွက်လေးတွေနဲ့မိယောနိစ်နဲ့ရောပြီးလုပ်ထားတဲ့ Salad လေးနဲ့တွဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့? ပိုလို့တောင်ကောင်းသေး အချဉ်ရည်လေးကိုလည်း စပ်စပ်လေးချပေးထားတော့ အတွဲအဆက်ကိုညီနေတာပဲ ?
Hot Drink ၊ Cold Drink တွေနဲ့ Fruit Juice တွေလည်းစုံမှစုံပဲ။ မင်မင်သောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖရဲသီးနဲ့နာနတ်သီးဖျော်ရည်လေးကတော့ ? အရမ်းကြီးမချိုဘဲ သဘာဝအရသာအတိုင်း အနေတော်လေးဖျော်ပေးထားတော့ အရသာလေးကမဆိုးဘူးပြောရမယ်။ Ice Lemon Tea လေးလည်းမဆိုးဘူး ? ချိုချဉ်အရသာလေးကိုမှ ခါးသက်သက်အရသာလေး ထပ်ပေါင်းထားတော့ အစားအသောက်များလို့ အီဆိမ့်ဆိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွက် လုံးဝကွက်တိပဲ ။ မင်မင်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အစားအသောက်တွေအပြင် နောက်ထပ် Menu တွေလည်းတစ်ပုံကြီးကျန်သေးတယ်နော်။
Kiasu Kitchen ရဲ့အားသာချက်ကတော့ တခြားဆိုင်တွေလို ကိုယ်တိုင်ယူစနစ်နဲ့မဟုတ်ဘဲ အချဉ်ရည်ကအစလာချပေးတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ အကျေအနပ်ကြီးကျေနပ်မိတယ် ? မင်မင်ကတော့ အစားတစ်လိုင်းတို့သွားစားကြည့်အခါ ကြက်ကြော် ၊ စင်ကာပူထမင်းကြော်နဲ့ ကြက်သားပြားနဲ့ကြက်ဆီထမင်းလေးကို Try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကို လာစားတဲ့စားသုံးသူတော်တော်များများက Foreigners တွေများတယ်။ မင်မင်ကတော့ အစားအသောက်တွေကအရသာရှိပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အပြင်အဆင်တွေကြောင့်လို့ပဲထင်တယ်။
အရသာထူးခြားပြီး ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကြက်ကြော်(၂)တုံးကို (၃၂၀၀) ၊ ထမင်းကြော်နဲ့ကြက်ဆီထမင်းက (၄၈၀၀) ၊ Burger က (၁၈၀၀) ၊ ဖျော်ရည်တွေက(၁၂၀၀)ဆိုတော့ တော်တော်လေးတန်တယ်ပြောရမယ် ? ? ကြက်ကြော်အရသာအသစ်ကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကို ကျိန်းသေ Try ကြည့်လိုက်ပါနော် ? “Kiasu Kitchen” ရဲ့လိပ်စာကတော့ (၁၁)လမ်းနဲ့လှည်းတန်းလမ်းကြား ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ် ၊ မော်တင်အနီး ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။